အရှက်ကွဲစွာဖုံးကွယ်ထားခြင်း - လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏မိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ (၂၀၁၁၉) - Your Brain On Porn
Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလိင်ကွဲယောက်ျားရဲ့အတှေ့အကွုံမြား (2019): အရှက်ကွဲခြင်းအတွက် Hidden
မှတ်ချက်များ။ လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်သည်မျှတမှုတစ်ခုလုံး၏တွေ့ရှိချက်ကိုအလေးပေးဖော်ပြနေစဉ် (အမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ စကားမပြောကြ) သော်လည်းအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်များမှာ (စိတ္တဇအောက်ရှိကောက်နုတ်ချက်များစွာဖြစ်သည်):
ညစ်ညမ်းယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကရှုထောင့်ထားသည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှု, တွေ့ကြုံရသောအခါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၎င်းတို့၏အသိ eroding စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လိင်နှင့်လိင်ရောက်လာသောအခါအချိန်ကျော်, လူတို့သညျရိပ်မိကြောင်းညစ်ညမ်း, လက်တွေ့မျှော်လင့်ချက်များရှိခြင်းအတွက်သူတို့အမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုအားပေးလမ်းကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားများနှင့် Masculinities ၏စိတ်ပညာ (2019) ။
Sniewski, လုကာ Farvid, Pani
အမျိုးသားများနှင့် Masculinities ၏စိတ်ပညာ, ဇူလိုင်လ 18, 2019, N ကို
ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှုအတွက်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားထောက်ပံ့ရေးဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုလက်ငင်း access ကိုအားပေးတော်မူပြီ။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်ညစ်ညမ်းအတူပြဿနာကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ညစ်ညမ်းအဖြစ်စွဲခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ၏ကြီးမားသောအများစုလိင်ကွဲလူဖြစ်ကြ၏။ ဤဆောင်းပါးသည်နယူးဇီလန်အတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်လိင်ကွဲယောက်ျားများ၏အတွေ့အကြုံများကိုဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ 15 လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းကြော်ငြာ, လူမှုရေးမီဒီယာအဝေးရောက်, သူတို့၏ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအလေ့အထနှင့်ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနှုတ်ကနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက data တွေကိုမောင်းနှင် inductive အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောသည့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ သူတပါးတို့သည်ကြည့်ရှုလောကဝှက်ထားထားရှိမည်မူလတန်းအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အမလွှဲမရှောင်ကိုသူတို့အသုံးပြုခြင်းကိုအကြောင်းကိုဖွင့်ပွဲတက်မှာကိုလိုက်နာအများဆုံး-လျှင်အားလုံးမဟုတ်-ကြည့်ရှုအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ကြိုးစားမှုမယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ၏ပူးတှဲပါအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ညစ်ညမ်းယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကရှုထောင့်ထားသည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှု, တွေ့ကြုံရသောအခါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၎င်းတို့၏အသိ eroding စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လိင်နှင့်လိင်ရောက်လာသောအခါအချိန်ကျော်, လူတို့သညျရိပ်မိကြောင်းညစ်ညမ်း, လက်တွေ့မျှော်လင့်ချက်များရှိခြင်းအတွက်သူတို့အမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုအားပေးလမ်းကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်အလုပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အီ၏အကျိုးသက်ရောက်စေအစပျိုးခြင်းတုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသင်ယူကူညီပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းသို့မဟုတ်ကြားဝင်ကမ်းလှမ်းရန်နိုင်ကြောင်းမဟာဗျူဟာများ အသုံးပြု. အတွက်လိုအပ်နေပါသည်။
အပြည့်အစုံကိုစက္ကူ FROM မှ
လူတို့သညျမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ပတ်သက်. တိတ်ဆိတ်ဖဲ့လက်ခံမှုတစ်မရှိခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အခါမသက်ဆိုင်သည့်ထွက်ပေါက်၏, ဤမြင်ကွင်းက hidden အသုံးပြုမှုကိုအားဖြည့်ဖို့ဝတ်ပြုကြလော့။ တချို့ကယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်အကြောင်းဟောပြောသည်။ အကူအညီ-ရှာကြံမှာထိုကဲ့သို့သောကြိုးစားမှုလူတို့သညျအဘို့အတန်ဖိုးရှိရှိခဲ့များနှင့်အချိန်များတွင်ပင်အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုဆိုးရွားဘူး။ မိက္ခေလအဓိကအားလေ့လာမှု-related စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူတစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခြင်းနှင့်သူ၏အထွေထွေ Practitioner ဆရာဝန် (မိသားစုဆရာဝန်) ထံမှအကူအညီရှာသောအခါခဲ့သည်:
မိုက်ကယ် - ငါအသက် ၁၉ နှစ်မှာဆရာဝန်သွားတဲ့အခါ။ ။ သူသည် Viagra ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပြီး [ကျွန်ုပ်၏ပြissueနာ] သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တခါတရံတွင်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံ၌၎င်း၊ ဒါဟာကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုတေသနနှင့်စာဖတ်ခြင်းငါ့ကိုပြissueနာ porn ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည် [။ ။ ။ ] ငါငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကဆရာ ၀ န်ကိုသွားပြီးသူကကျွန်တော့်ကိုအပြာဆေးလုံးကိုညွှန်ကြားတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကို porn အသုံးပြုခွင့်မပြုဘူး၊ Viagra ကိုမပေးသင့်ဘူး။ (၂၃ နှစ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ကျောင်းသား)
မိမိအတှေ့အကွုံမြား၏ရလဒ်အဖြစ်မိုက်ကယ်ပြန်ကြောင်းမိသားစုဆရာဝန်ထံသို့ ဝင်. နှင့်အွန်လိုင်းသူ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလုပ်နေတာစတင်ခဲ့တာပါ။ သူကနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုအလားအလာပံ့ပိုးအဖြစ်ညစ်ညမ်းစဉ်းစားရန်စေသောအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အလားတူအမျိုးအစားဖော်ပြမယ့်လူကိုဆွေးနွေးခြင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မိမိအအသက်အရွယ်, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းအောင်ပြီးနောက်, သူ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စပြုလာသည်။ သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူ့ရဲ့စုစုပေါင်းအကြိမ်ရေကိုလျှော့ချမပြုခဲ့သော်လည်း, သူသည်သူတို့သာဖြစ်ရပ်၏ထက်ဝက်ခန့်အဘို့အညစ်ညမ်း watched ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူကညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါင်းစပ်အဆပမာဏကို halving အသုံးပြုပုံမိုက်ကယ်သူသိသိသာသာမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းမိမိအ erectile function ကိုတိုးတက်စေရန်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
Phillip မိုက်ကယ်ကဲ့သို့မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်အကူအညီရှာ၏။ မိမိအကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြဿနာတစ်ခုသိသိသာသာလျှော့ချလိင် drive ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအပြဿနာနှင့်သူ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရန်၎င်း၏လင့်များအကြောင်းကိုမိမိအမိသားစုဆရာဝန်ချဉ်းကပ်သောအခါ, မိသားစုဆရာဝန်သတင်းများအရပူဇော်ဖို့ဘာမျှခဲ့ရပြီးအစားအထီးကလေးမွေးဖွားအထူးကုသူ့ကိုရည်ညွှန်း:
Phillip: ငါတစ်မိသားစုဆရာဝန်ထံသို့ ဝင်. သူငါအထူးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မယုံတဲ့သူအထူးကုမှငါ့ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ သူတို့ဟာတကယ်ပဲငါ့ကိုအဖြေတစ်ခုပူဇော်မယ့်ကိုအလေးအနက်ထားငါ့ကိုယူမခံခဲ့ရပါ။ ငါ testosterone ဟော်မုန်းရိုက်ချက်များခြောက်လပတ်သူ့ကိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်နှင့် $ 100 တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ခဲ့, နှင့်တကယ့်ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသို့မဟုတ်အခြေအနေလုံလောက်သောခဲ့မခံစားရဘူး။ (29, အာရှ, ကျောင်းသား)
အင်တာဗျူး: အဲဒီနောက်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်ကနေသင်တို့ကိုတားဆီးကြောင်း [သငျသညျဖျောပွခဲ့တဲ့ယခင်အမှတ်ရှင်းလင်းစေရန်, ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်]?
Phillip: Yup ။
သင်တန်းသားများကိုအားဖြင့်ရှာသောအခါအဆိုပါထှထှေကေုနဲ့အထူးကုသာပြီးတော့ biomedical ဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်းရန်စာပေအတွင်းမှာဝေဖန်လျက်ရှိသည်တစ်ခုချဉ်းကပ်သလိုပဲ (Tiefer, 1996) ။ ထို့ကြောင့်ဤလူတို့သညျမိမိတို့အထှထှေကေုထံမှလက်ခံရရှိရန်နိုငျခဲ့ကွန်ဆောင်မှုနှင့်ကုသမှုမလုံလောက်ယူဆပေမယ့်လည်းထပ်မံပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းမှသူတို့ကိုကှာခဲ့သည်သာ။ ပြီးတော့ biomedical တုံ့ပြန်မှုဆရာဝန်များများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအဖြေဖြစ်ဟန်ပေမယ့် (Potts, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, Gavey & Vares, 2004), လူတို့သညျအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြသည့်ကိစ္စရပ်များကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးများပါတယ်အဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုဘက်စုံ client-ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှု, လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးလူတို့သညျသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသာမကြာသေးမီကစာပေအတွင်းလေ့လာခဲ့ပြီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ဖူးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ပန်းခြံများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2016) , အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါရှာတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်လျော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှစွပ်စွဲထားတဲ့ဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒံယလေကသူတစ်ဦးစိုက်ထူရကိုစောင့်ရှောက်ရန်မတတျနိုငျသညျ့၌သူ၏အတိတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။ သူဟာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းမှနှိုင်းယှဉ်မရသူ့ရည်းစား '' အလောင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်နွယ်:
Daniel: ငါ့အယခင်နှစ်ခုမိန်းကလေးငါ porn ကိုကြည့်မရသူတစ်စုံတစ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လမ်းအတွက်နှိုးဆွသောသူတို့ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိတော့ဘူး။ ငါကြိုက်တယ်သောအထူးသဖြင့်သောအရာတို့ကိုသိသည်နှင့်သင်ရုံသင်ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်လိုချင်တာတွေအကြောင်းကိုအလွန်ရှင်းလင်းသောစံဖွဲ့စည်း start နှင့်အစစ်အမှန်အမြိုးသမီးမြားကဲ့သို့မဟုတ်ကြောင်း, ဤမျှလောက်များစွာသောအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးအလောင်းကောင်မြင်ဘူး။ အကြှနျုပျ၏မိန်းကလေးစုံလင်သောအလောင်းကောင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါနဲ့ငါချောရဲ့စဉ်းစားပေမယ့်ငါနှိုးဆွသောသူတို့ကိုရှာတွေ့၏လမ်းတယ်ထင်ပါတယ်။ ထိုအသောဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာများကိုစေ၏။ ငါနှိုးဆော်ခြင်းမခံသောကြောင့်ငါလိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ဘူးကြိမ်ရှိပါတယ်။ (27, Pasifika, ကျောင်းသား)
အားလုံးသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့သတိထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အားလုံးအခက်အခဲများလုပ်ရပ်များထိန်းချုပ်တားဆီးရန်လျှော့ချ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့လျှော့ချသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုခြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်သည်မိမိခေါင်းကိုခါသူညစ်ညမ်းရှောင်၌မိမိအခက်အခဲအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်အဖြစ် smirked:
ဒါဝိဒ်သည်: သကဲ့သို့ငါ၏ဦးနှောက် some- အရာနဲ့စတင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ "သင် porn ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်" ဟုဒီရယ်စရာအရာရဲ့, ပြီးတော့ငါ့အဦးနှောက် "Oh, ငါမလုပ်ဆောင်သင့်တယ်" ထင်ပါလိမ့်မယ်ထိုအခါမူကား, ငါသွားနှင့်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမှာ။ (29, Pa¯keha¯, Professional က)
ဒါဝိဒ်သည်မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှကြွလာသောအခါသူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်ထဲမှာဆွဲထုတ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး intrapsychic ပဋိပက္ခ, ဖော်ပြသည်။ ဒါဝိဒ်က, နှင့်အခြားသောသင်တန်းသားများကိုများစွာသောအဘို့, ညစ်ညမ်းလောင်ဖို့သွေးဆောင်မှုတသမတ်တည်းဒီပြည်တွင်းရေးထွက်အနိုင်ရရှိခဲ့ "စစ်ပွဲ၏ဆွဲ။ "
တဦးတည်းပါဝင်သူသူနှိုးဆော်ခြင်းဖွစျလာတဲ့အခါသူခံစားခဲ့ရသည်ခိုင်ခံ့သော visceral အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့မိမိအသွေးဆောင်မှုနှင့်တဏှာဟာတတ်ပြီးကျေနပ်ခဲ့ချိန်အထိသူအရာအားလုံးထက်အာရုံစိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လွှမ်းမိုးသောခဲ့ကြသည်:
မိုက်ကယ်: ငါနှိုးဆော်ခြင်းတာပါအခါ, ငါ masturbate ရန်ရှိသည်။ ငါစာသားကကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ဒါဟာငါ့အဆုံးဖြတ်ချက်များထိန်းချုပ်သည်။ ငါနှိုးဆော်ခြင်းတာပါအခါ, ငါဆင်ခြင်တုံတရားဘူး။ ငါနှိုးဆော်ခြင်းရသည့်အခါငါနဲ့ browsing ကိုစတင်ပါ။ ထိုသို့ငါတော်တော်များများအခါတိုင်းထဲသို့ကျတဲ့ထောင်ချောက်ပါပဲ။ ငါနှိုးဆော်ခြင်းတာလိုက်တဲ့အခါကျွန်မ shit မပေးပါဘူး! (23, အလယျပိုငျးအဘိဓါန် Eastern, ကျောင်းသား)
လူတို့သညျသူတို့အဘို့အဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းနီးပါးအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးပိုင်းခြားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ချင်ပါဘူးတဲ့ "ဆင်ခြင်တုံတရားမိမိကိုယ်ကို" နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျော်မျှမထိန်းချုပ်ရှိကြောင်းကို "နှိုးဆော်ခြင်းမိမိကိုယ်ကို" အကြားခဲ့ပါတယ်။ ကယောက်ျားရဲ့ SPPPU ရောက်လာသောအခါဤ "arousal အလွန်အရေးကြီးသည်" ဟု linear ဇာတ်ကြောင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ လူတို့သညျနှိုးဆော်ခြင်းခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့သူတို့မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှာနီးပါး masturbatory orgasm လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်နေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ညစ်ညမ်း ဆက်စပ်. အတွက်သင်တန်းသားများကို '' အမူအကျင့်ပုံစံကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုချိုးဖောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ် (Deci & Ryan, 2008) ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, သို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့အလိုဆန္ဒများနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု, ခေတ်ပြိုင်အခြေအနေတွင်အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်စဉ်းစားသည် (ဘရောင်း, ရိုင်ယန်, & Creswell, 2007) ။ အမှန်မှာစာပေတစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Self-functioning ၏ သာ. သည့်အမြင်, ရိပ်မိပျော်ရွှင်မှု သာ. ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြတော်မူပြီ (Ramezani & Gholtash, 2015) ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ရိပ်မိမရှိခြင်းကိုဆှေးနှေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရှင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်-in ကိုသုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဆီးတားလေ၏။
ပထမဦးစွာယောက်ျား willpower နှင့်၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုဖို့စပ်လျဉ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ "အားနည်းခြင်း" ၏နောက်ဆက်တွဲခံစားချက်များကိုမိမိတို့မရှိခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဲလ်ဘတ်နှင့်ဖရန့်ထိန်းချုပ်သူတို့ရဲ့မရှိခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းခံစား၏အကျိုးဆက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်က, ပေါလု, Brent နဲ့အခြားဘဝ domains များ (ဥပမာ, အလုပ်, ပန်းတိုင်, လူမှုရေးဆက်ဆံရေး) ကျော်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတန်ဖိုး, သေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းငှါလာသောအခါမိမိတို့စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အာဏာမဲ့ခံစားရတယ်။ ဤလူတို့သညျအဘို့အမြင့်မားစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ,
Wallace: ဒါဟာကျယ်လောင်သောကထွက်ဟုတကယ်ကိုလိုက်တယ်ခံစားရပေမယ့်ကိုယ်ကသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ရောက်လာသောအခါထိန်းချုပ်ခံရရပ်တန့်ချင်ချင်ပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် masturbate မှထားရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရေချိုးခန်းရှိသည်ဖို့ရေချိုးခန်းထဲသွားလိုပဲ။ ငါ့ကိုကျော်ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နှိုးဆော်ခြင်းခံစားရရန်စတင်ငါထင် "ငါအခုလုပ်ပေးရန်ရှိသည်ခန့်မှန်း။ " (29, Pa¯keha¯, ဆရာ)
တိုက်ရိုက်ယောက်ျားအားဖြင့်ဆက်သွယ်မရသော်လည်း, ဖွယ်ရှိမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူအေဂျင်စီ၏ဤရိပ်မိမရှိခြင်းရိုးရာပုလ်ဝိသေသလက္ခဏာ၏အခြေခံချိုးဖောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် Self-ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏အယူအဆတွေကိုမကြာခဏအနောက်ဘက်အတွင်းပုလ်စရိုက်များအဖြစ်တွေကပေါ်ကနေများမှာ (Canham, 2009) ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိခြင်းညွှန်ပြပေမယ့်လည်းခေတ်ပြိုင်ယောကျ်ားဘဝများ၏အခြေခံအချို့ကိုချိုးဖောက်မသာအဖြစ်ထို့ကြောင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်၏ယောက်ျားရဲ့မရှိခြင်း, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆန့်ကျင်ထငျရှားပါသညျ။ စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းလူတခြို့မှန်ကန်စွာပုလ် "ပြုပါ" နိုငျသောတစ်ပုလ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ်ဦးနည်းလမ်းများစဉ်းစားသည်ဖြစ်သော်လည်း (Antevska & Gavey, 2015) - compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု disempowerment နှင့်၎င်းတို့၏ပုလ်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်, အပျက်သဘောစည်းကမ်းချက်များ၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
သင်တန်းသားများကိုလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တစ်ခု undermining ကြုံတွေ့နှင့်၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုကာအလိုအလျှောက်အလေ့အထဖွစျလာတဲ့အခါအေဂျင်စီတစ်ခုမရှိခြင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်း၏အတွေးကသူတို့စိတ်ကိုဝင်ကြ၏တစ်ချိန်ကဒါမှမဟုတ်သူတို့နှိုးဆော်ခြင်းဖွစျလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့သင်တန်းကို run ဖို့လိုအပျတဲ့မလှူသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီလူများအတွက်, တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်တွေနဲ့ဆက်စပ်အပျော်အပါးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှေးမှိန်ခဲ့ပြီးလေ့တုံ့ပြန်မှုပုံစံဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဥပမာ,
ဒေးဗစ် - ငါ porn ကိုပိုပြီးပျော်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါလုပ်နေတာတစ်ခုပဲလို့ခံစားရတယ်။ ငါသိပ်ပြီးမပျော်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြီးအောင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုတာငါသိတယ်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ ငါလိုက်နာရန်လိုအပ်တစ်ခုခု ထွက်ပေါက်ကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုအရင်ကမတူဘူး။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသောမကျေနပ်မှုများနှင့်ရွံရှာဖွယ်ရာများပိုမိုများပြားလာသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်မှကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အဆုံးရှိသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်အဆုံး၌ညစ်ညမ်းသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုကျွန်တော် ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်၏နေ့နှင့်အတူဆက်သွားသည်။ (၂၉ နှစ်၊ ပါကဟာ၊
ဒါဝိဒ်၏အတှေ့အကွုံကဒီလေ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပုံစံများ၏ဒုက္ခသဘောသဘာဝကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဖြစ်စဉ်မှလွတ်မြောက်ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအားကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, မကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ရွံရှာ) နှင့်ဆက်စပ်သည်, အထူးသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်များအတွက်ဒုက္ခခံစားခဲ့ရအဖြစ်နေရာယူထားသည်ကိုမရ။ ယောက်ျားတစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကသူတို့အသိထဲမှာအရှုံးမခံစားရနိုင်ပါတယ်တဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာဆင်းရဲခံရနိုင်သည် (Canham, 2009) ။ ဖရန့်, ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့အစပိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အပျြောအပါးနှင့်အဆွတာကိုဆုံးရှုံးနှင့် pleasureless မလှူတဲ့မြင်ကွင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်:
ဖရန့်: ဒါဟာဒီ compulsive အရာပါပဲ။ ငါကလုပ်ဖို့မဖြစ်မနေခံစားရတယ်။ ငါတောင်စဉ်းစားမရင့်နဲ့တူဒါဟာ [ခံစားရပါတယ်။ ။ ။ ] ဒါဟာလေ့ပါပဲ။ ငါ [ကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်မည်သို့မသိရပါဘူး။ ။ ။ ] တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ကဗလာခံစားရ orgasm မှတကယ်ခက်ကြိုးစားနေတာပါအခါ။ ငါကိုယ်ထိလက်ရောက်ဘာမျှမခံစားရသည်။ ငါပြီးအောင်သောအခါငါပင်ပထမနေရာ [အတွက်ကိုပြု၏အဘယ်ကြောင့်, ပြီးတော့ငါတွေးမိ။ ။ ။ ] ကပင်ပျော်မွေ့မယ့်လို့ပဲ။ (27, အာရှ, ကျောင်းသား)
ဖရန့်ရဲ့အခွအေနကေို SPPPU နှင့်အတူယောက်ျားများအတွက်ပြဿနာသဘောသဘာဝများနှင့်အတွေ့အကြုံ encapsulate ပုံရသည်။ အဖြစ်ညစ်ညမ်းကြောင့်တစ်ချိန်ကခဲ့-ကအပျော်အပါးများကငျးမဲ့တဲ့ compulsive နဲ့ automatic အလေ့အထသို့ပြောင်းလဲခဲ့သကဲ့သို့ဆွ-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွငျ့လှုံ့ဆျောတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခြင်းမှဆန့်ကျင်။ ဒုစရိုက်ဖြေ, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်, disempowerment ၏နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံများကိုလူတို့သညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုရပ်တန့်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်များ၏အကျိုးဆက်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးလူတို့သညျမိမိတို့၏မြင်ကွင်းကသူတို့ကိုတစ်လျော့နည်း, လှုံ့ဆော်စေ့စပ်နှင့်မိမိတို့သရုပ်ြပဗားရှင်းနဲ့တူခံစားမိစေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်မိုက်ကယ်လုံးဝစွမ်းအင်ညှစ်ခံစားရလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလေ့လာသို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မဆိုလှုံ့ဆျောမှုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုကြည့်ပြီးနောက်မှေးမှိန်။ သူက ", ပြတ်သား" မိုက်ကယ် "ပစ္စုပ္ပန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, စေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်ခြင်း" အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ Self-အစီရင်ခံအရည်အသွေးမရှိခြင်းအဖြစ်ဘဝနှင့်အတူ reengage ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြထား:
မိုက်ကယ်: ငါ masturbate ပြီးနောက်, ငါလျော့ကျခံစားရတယ်။ အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှု။ ငါပြတ်သားမခံစားရဘူး။ ကိုယ့်အနိမ့်နှင့်ကွယ်ပျောက်သွား feeling, ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ ပြည်သူ့ကိုသင်စကားပြောနေကြသည်ပေမယ့်သင်တကယ်မဖြေနိုင်။ ထိုအခါပိုပြီးငါခံစားရလျော့နည်းပြတ်သား masturbate ။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းစေသည်ထင်ကြပါဘူး။ (23, အလယျပိုငျးအဘိဓါန် Eastern, ကျောင်းသား)
မိုက်ကယ်ကဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ၏မရှိခြင်း, ဖရန့်အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အနတ္တ၏ခံစားခကျြမြားနှငျ့နှိုငျးယှဉျအသံ။ မိက္ခေလ, အစဉ်အဆက် how- သည်သူ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသူ၏အသက်တာတွင်အခြား domains များထိခိုက်ပုံကိုဆွေးနွေးကြသည်။ သူကစောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်း, မဟုတ်ရင်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်အသုံးပြီမယ်လို့စွမ်းအင်သုံးနလေ့လာနေ, ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပဲပေါလု, ကြည့်ရှုပြီးနောက်စွမ်းအင်တစ်ခုမရှိခြင်းကြုံတွေ့ကား, မိမိ Post-ညစ်ညမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးတက်နှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်အတူကလေးများရှိခြင်းကနေသူ့ကိုတားဆီးခံစားရတယ်။ : သူကသူ့ရွယ်တူ, ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုခုန်အတွက်တိုးတက်ကလေးများခဲ့, သူတို့၏ဝင်ငွေတိုးပွားလာနေချိန်တွင်သူကမှီဝဲခဲ့ကွောငျးမြည်တမ်း
ရှင်ပေါလု - ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကို ၀ င်ငွေကောင်းသောဘဝတွင်နေထိုင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဘာမျှမလုပ်၊ တွေးခြင်း၊ ငါ့မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကြောင့်ငါ့မှာမိသားစုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ (၃၉ နှစ်၊ ပါက၊ ပညာ)
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းသည့်၎င်းတို့၏လိင်အမျိုးမျိုးရှုထောင့်နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ မိုက်ကယ်ညစ်ညမ်းအထူးသူညစ်ညမ်းအတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်းမိန်းမနှင့်ထပ်ဖွကြိုးပမ်းမယ်လို့ပြုမူသောအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ပုံကိုဆွေးနွေးကြသည်။ သူကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်သူမှန်မှန်အတွက်စေ့စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူဆွေးနွေးနှင့်ဤလုပ်ရပ်များခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုသဘာဝကမေးခွန်းထုတ်:
မိုက်ကယ်: ငါမဇီဝဗေဒရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောမိန်းကလေးတစ်ဦး၏မျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ခါတစ်ရံ cum, ဒါပေမယ့်ငါ porn ကနေရတယ်။ အဘယ်ကြောင့်မတံတောင်ဆစ်? အဘယ်ကြောင့်မဒူး? အဲဒါကိုမလေးစားတဲ့တစ်အဆငျ့ရှိပါတယ်။ ပင်မိန်းကလေးသဘောတူညီချက်သော်လည်းနေဆဲလေးစားပါတယ်။ (23, အလယျပိုငျးအဘိဓါန် Eastern, ကျောင်းသား)
မိုက်ကယ်ဖို့ကမျက်နှာ ejaculate တစ် sexy နှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာအရပျဖွဲ့သောညစ်ညမ်းခဲ့အတိုင်းဤတိကျတဲ့လမ်းအတွက်အော်ဂဇင်မှဒီအလိုဆန္ဒ, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏ရလဒ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကမှုတ်သွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ခွင့်ပြုချက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ congruency pornography- မှကြွလာသောအခါမိုက်ကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ် conundrum ထပ်ဆင့်လွှင်။ မိုက်ကယ်အဘို့, လိင်မလေးစားခံစားရကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ejaculating, သေးသောကြောင့်သူများတွင်ပါဝင်နေသည်တစ်ဦးအလေ့အကျင့်ပါပဲ။ သူ့ခံစားချက်တွေကိုသူကသူ့အဘို့အတော်လေးပိုင်ခွင့်မပေးကြောင်း, တစ်ဦးလိင်အပြုအမူအဖြစ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ရဲ့သဘောတူညီခကျြဖွငျ့များလျော့ကျကြသည်မဟုတ်။ ဤတွင်မိုက်ကယ်ဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးညစ်ညမ်းနှင့်အတူဆက်ဆံရေးနှင့်သူ၏လိင်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုထပ်ဆင့်လွှင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်မိုက်ကယ်ရဲ့အခွအေနေလည်းမီဒီယာလက်ခံနိုင်ဖွယ် (သို့မဟုတ်လက်မခံနိုင်) အပြုအမူဖော်ပြထားပါတယ်တစ် heuristic မော်ဒယ်ပေးသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍနိုငျကွောငျး posits ထားတဲ့သိမြင် script များသီအိုရီနှင့်အတူ aligns အဖြစ်အရေးယူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်သင်တန်း၏ရလာဒ်ဖြစ်သင့်သောအရာကို (Wright, 2011) ။ ထိုအဖြစ်ရပ်အတွက်, ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းလောင်ကြောင်းယောက်ျားသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံနိုငျသောအနေဖြင့်တစ်ဦး heuristic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုထောက်ပံ့ (Sun က, တံတားများ, ဂျွန်ဆင်, & Ezzell, 2016) ။ mainstream ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခြင်း, တမင်တကာ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာပုံရိပ်တွေ conjuring တစ် partner ၏အထူးညစ်ညမ်းလိင်အပြုအမူတောင်းခံအပါအဝင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအဘို့အသိသာထိခိုက်အကျိုးဆက်များ, ဖန်တီးနိုင်သည့်ခိုင်မာခြင်းတသားတည်း script ကိုခန့်သိမ်းကျုံး စုပေါင်း. ထားပါတယ် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးအပြုအမူကနေဆင်းသက်လာအပျော်အပါးနှင့်ခံစားတဲ့လျော့နည်းသွားအသိ (Sun က et al ။ , 2016) ။ သင်တန်းသားများကိုပေး data တွေကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ထိခိုက်အတူစာပေနှင့်အတူ align ပုံရသည်။
ညစ်ညမ်းလိင်၏ကျဉ်းမြောင်းသောနှင့်လက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များဖန်တီး (Antevska & Gavey, 2015) ။ ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်လူတို့သညျအခြို့ကညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားမျှော်လင့်အထိတိုင်းတာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းလိင်အတွက်စိတ်မဝင်စားရဖို့စတင်ခဲ့ပြီး:
ဖရန့်: ငါကိုမှန်ကန်လိင်တူခံစားမျှော်လင့်လွန်းမြင့်မားသောကြောင့်အဖြစ်မလျောက်ပတ်။ အဆိုပါပစ္စည်းပစ္စယငါသူမ၏အိပ်ရာထဲမှာလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ porn ပုံမှန်လိင်ဘဝတစ်ခုလက်တွေ့သရုပ်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ istic ပုံရိပ်တွေ unreal- ဖို့အသုံးပြုတယ်သောအခါ, သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောလိင်ဘဝ porn များ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပျော်မွေ့ကိုက်ညီဖို့မြျှောလငျ့။ သို့သော်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါအခါ, ငါအနည်းငယ်စိတ်ပျက်ရပါတယ်။ (27, အာရှ, ကျောင်းသား)
ဂျော့ခ်ျ: ငါထင်တာကတော့လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေကတကယ့်ဘ ၀ မှာတူညီတာမဟုတ်ဘူး၊ ။ ။ ] ပြီးတော့ငါအသုံးပြုတာကတကယ့်ကိုမမှန်၊ Porn သည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များထားရှိသည်။ (၅၁ နှစ်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆရာ)
ဖရန့်နှင့်ဂျော့ခ်ျ "Pornotopia", ", lusty အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်အမြဲ orgasm အမြိုးသမီးမြား" ၏တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးအလွယ်တကူအထီးကြည့်ဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြောင်းညစ်ညမ်းတစ်ခုရှုထောင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ (မုန်, 2012) ။ ဒီလူများအတွက်, ညစ်ညမ်းအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမရနိုင်တော့မယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကဖန်တီး "အဖြစ်မှန်။ " ညစ်ညမ်း၏ထိုသို့သောသက်ရောက်မှုများ၏အသိအမြင်, သို့သော်, စားသုံးမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အစား, အခြို့သောသူတို့သညျကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလူတို့သညျသူတို့အညစ်ညမ်းအတွက်တွေ့မြင်သောအရာကိုထပ်ဖွခွင့်ပြုတဲ့သူကသူတို့ညစ်ညမ်းဦးစားပေးသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်သောမိန်းမတို့ကိုရှာနေစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအမျှော်လင့်ချက်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါလူတို့သညျအခြို့ကိုစိတ်ပျက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်လျော့နည်းလိင်နှိုးဆွဖြစ်လာသည်:
အဲလ်ဘတ်: ငါဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေအမျိုးသမီးများ၏ဤမျှလောက်များစွာသောပုံရိပ်တွေနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတှေ့မွငျရင့်သောကြောင့်, ငါကခက်ခဲငါဗီဒီယိုများအတွက်စောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေထဲမှာတွေ့မြင်မိန်းမတို့၏အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုမရှိပါကြောင်းမိန်းမနှင့်ဖြစ်ရှာပါ။ အကြှနျုပျ၏မိတ်ဖက်ငါဗီဒီယိုများ [အတွက်စောင့်ကြည့်သောအပြုအမူတွေကိုမှတက်မတိုက်ဆိုင်ကြဘူး။ ။ သငျသညျအလွန်မကြာခဏ porn ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ။ ] ငါအိပ်ရာကိုငါလျော့နည်းနှိုးဆော်ခြင်းရကြောင်းမရကြဘူးသည့်အခါအမျိုးသမီးတွေအမြဲ sexy ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အတွင်းခံထဲမှာအရမ်း sexy ဝတ်ဆင်နှင့်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါတယ်။ (37, Pa¯keha¯, ကျောင်းသား)
အဲလ်ဘတ်ကသူ၏ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူအမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုလွှမ်းမိုးစတင်ခဲ့ပုံကိုသတိပွုမိတော့တာပဲ။ သူဟာနောက်ပိုင်းတွင်မျှော်လင့်-နှင့်စတင်ခဲ့ ing-သည်ဤဦးစားပေးသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ request- ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်အင်တာဗျူးတွင်ထုတ်ဖော်။ အမြိုးသမီးမြားကိုသူညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့လက်တွေ့ဗေဒမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးသောအခါသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့လိမ့်မယ်။ အဲလ်ဘတ်နှင့်အခြားသင်တန်းသားများအဘို့, ပုံမှန်အစည်းအဝေးအမျိုးသမီးတွေကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမိန်းမများမှတက်မကိုက်ညီခဲ့ပါဘူး "Pornotopia ။ " babyish မကြာခဏအစစ်အမှန်လိင်, အစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်လိင်ကျော်ညစ်ညမ်းများအတွက် preference ကို, သို့မဟုတ်ရှာနေနှင့်အတူစိတ်ပျက်စရာမှဦးဆောင်သောဤလူတို့သညျရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို-The ညစ်ညမ်းစံပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ resembled- သောမိန်းမတို့ကို။
သင်တန်းသားများကိုလည်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးကြသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းဦးစားပေးအနေနဲ့ "တင်းမာမှု" ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်ကြောင်း:
ဒါဝိဒ်သည်: ပထမဦးဆုံးမှာကအဲဒါလိင်ဆက်ဆံစုံတွဲများတဲ့အထိတိုးတက်, တဖြည်းဖြည်းအဝတ်အချည်းစည်းရတဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတော်လေးအစောပိုင်း မှစ. , ငါသည်လိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံဆင်းကျဉ်းမြောင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ့အလိုရှိသမျှ porn ကြည့်ရှု [ စတင်. ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ။ ။ ] ထိုအရပ်မှ, ငါ့ကြည့် ပို. ပို. လွန်ကဲတယ်။ ငါကပိုယုံကြည်အသုံးအနှုန်းတွေနာကျင်မှုများနှင့်အဆင်မပြေသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ, ငါကြည့်ရှုအားပေးဗီဒီယို ပို. ပို. အကြမ်းဖက်ရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမုဒိမ်းမှုတူဖို့လုပ်နေကြတယ်ဗီဒီယိုများ, အဖြစ်။ အဘယ်သို့ငါအဘို့အသွားခဲ့အိမ်လုပ်ပစ္စည်းပစ္စယ, အပျော်တမ်းစတိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်မှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တူသောကြောင့်ယုံကြည်ကြည့်ရှုကြ၏။ (29, Pa¯keha¯, Professional က)
စာပေ compulsive နှင့် / သို့မဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစျေးမှာသွေးဆောင်အသစ်အမျိုးအစားများကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ထုတ်ရှာကြံသုံးစွဲ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်ပုံစံ, အံ့သြစရာ, ဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်ချက်ပင်ချိုးဖောက်မှုကိုအရှိန်နှင့်ကြာတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအကြံပြုထားသည် (Wéry & Billieux, 2016) ။ စာပေနှင့်ကိုက်ညီ, ဒါဝိဒ်သည်ညစ်ညမ်းရန်သူ၏နယ်ပယ်ညစ်ညမ်းဦးစားပေးအဖြစ်မှတ်။ အမှန်စင်စစ်လက်တွေ့ရှာဖွေနေမုဒိမ်းကျင့်ဖို့ဗလာထံမှတင်းမာမှုသည်ဒါဝိဒ်ပြဿနာစေခြင်းငှါမိမိအသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့, ဒံယေလလည်းသူတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုလိင်နှိုးဆွသောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏နှစ်ကြာပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဒံယလေကအထူးသယောနိထိုးဖောက် penises ၏, ဂရပ်ဖစ်မြင်ကွင်းများ porno- ရန်သူ၏ကျယ်ပြန့်ထိတွေ့ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးလိင်တံ၏ရှေ့တော်၌နေဖြင့်နှိုးဆွလိင်ဖြစ်လာ:
ဒံယလေက: သင်အလုံအလောက် porn ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့သိပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်ကတည်းကသင်အဖြစ်ကောင်းစွာ penises ၏မြင်ကွင်းများအားဖြင့်နှိုးဆွတဲ့စတင်ဖို့။ ထိုအခါလိင်တံဆွနှင့် arousal တစ် conditional နဲ့ automatic အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ ငါ့အဘို့ငါ့ဆွဲဆောင်မှုလိင်တံနှင့်လူတခြားဘာမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရုံကိုဘယ်လိုဒေသတွင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါပဲ။ ငါကလည်းတူသောဒီတော့ကျနော်လိင်တံထက်အခြားယောက်ျားထံမှဘာမျှမရယူထားခြင်း။ သငျသညျကူးယူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပေါ်သို့က paste လျှင်, ကြောင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါပဲ။ (27, Pasifika, ကျောင်းသား)
၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းဦးစားပေးပြောင်းလဲအဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, နှစ်ဦးစလုံးလူတို့သညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌မိမိတို့၏ဦးစားပေးလေ့လာစူးစမ်းဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။ ဒါဝိဒ်သည်မိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ညစ်ညမ်းဦးစားပေးအချို့ကိုအထူးစအိုလိင်ဆက်ဆံ reenacted ။ ဒါဝိဒ်သည်မိမိမိတ်ဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ၏လက်ခံသောအခါအမြဲဆက်ဆက်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်အမှုမဖြစ်အရာ, အလွန်စိတ်သက်သာရာ feeling ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည်, သို့သော်, သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုညစ်ညမ်းသည်မိမိ preference ကိုထုတ်ဖော်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒံယေလသည်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့လည်းမိမိအညစ်ညမ်းဦးစားပေး reenacted နှင့်လိင်မိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးဖွငျ့စမ်းသပ်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာနှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှငျ့ပတျသကျသောစာပေအရ, သို့သော်, ဒါဝိဒ်နှင့်ဒံယလေကနှစ်ဦးစလုံး၏အမှုများကိုသေချာပေါက်စနစ်တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ဒီထက်သမားရိုးကျအလေ့အကျင့်အကြား link တစ်ခုရှိပေမယ့်, တစ်ဦးချင်းစီ၏သိသာထင်ရှားသောအချိုးအစားကြည့်ရှုပျော်မွေ့အထူးသဖြင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သော-သူတို့လုပ်ရပ်များ acts- အဆိုပါညစ်ညမ်း reenacting မစိတ်ဝင်စားမှုများ (Martyniuk, Okolski, & Dekker, 2019) ။
ဒီလူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏ရလဒ်အဖြစ်အချို့သောလူတို့သညျအဘို့ဖွစျပျေါနိုငျသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အဆင့်အထိစကားမပြောတတ်။ လိင်နှင့် arousal by- နှိုးဆွသို့မဟုတ်အချို့သောရူပ, အလောင်းတွေ, အဝတ် to- ချိတ်ဆက်ထားသောအရာဖြစ်လာ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲလူတစ်ဦး၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်လူနှစ်ဦးအကြားရင်းနှီးဆက်သွယ်မှုထက်ပြုမူ။ ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ပြတ်တောက်ကြောင်းလိင်၏နမူနာပုံစံတစ်ခုဖန်တီးခြင်းအလွန်အမင်းအမြင်အာရုံနှင့်အကြီးအကျယ် objectification အပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့ပုံရသည်။ ရငျးနှီးတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တူးဖော်ရေးသို့မဟုတ်စကားရပ်ဆန့်ကျင်အဖြစ်လိင်, အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သက်သက်သာစက်မှုလုပ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။